Inyanga kwi-Scorpio Woman: Mazi ngcono - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Inyanga kwi-Scorpio Woman: Mazi ngcono
Inyanga kwi-Scorpio Woman: Mazi ngcono
INyanga kumfazi waseScorpio ifuna ukuhlala nobudlelwane obunothando obunamandla, kwaye iya kufuna iqabane elizimisele ukuyekisa okuninzi ukuze libe naye.
Ufuna ukucela umngeni kwisithandwa sakhe, ukuze abone ukuba uyakwazi na ukumfaka kuxinzelelo lweemvakalelo, kwaye ukuba ufumana impendulo eyonelisayo, uya kuba ngomnye wabemi abathembekileyo nabazinikeleyo kwi-zodiac.
Inyanga kumfazi waseScorpio ngamafutshane:
Iimpawu: Kubaliwe kwaye kugqityiwe
Izinto ezingalunganga: Ukudlala ngothando nokukrokrela
Umphefumlo womphefumlo: Umntu okhululekile kulusu lwakhe
Isifundo sobomi: Ukuphambukisa naziphi na iimvakalelo ezimbi anokuhlangabezana nazo.
Uya kuthatha onke amathuba anokuthathelwa ingqalelo
Lo mfazi uyathandeka kwaye uyathandeka, uyathandeka kwaye uyala. Ezi mpawu zithathwa kakhulu kunye naye. Akukho ndoda ikwaziyo ukumelana nokuqhubela phambili kwakhe, kwaye akukho namnye onako ukwenza ngathi ungumfazi olula. Isimo sakhe sengqondo sibangela imbeko kunye noloyiko kubathetheli bakhe.
Abanye bayayithanda indlela aphila ngayo, ngelixa abanye bemoyika ngethuku lemvelo. Awunakho ukusebenzisa umfazi onjalo owaziyo ukuba ufuna ntoni ebomini kunye nendlela yokufumana.
Ayikuko ukuba unobuchule ngokukodwa okanye unamabhongo, kodwa ukuba isimo sakhe sengqondo sikhuthaza iimvakalelo ezithile kuye wonke umntu adibana naye.
Wayengoyiki ukuba akazukufumana uthando olunye lokwenyani, okanye ukuba akafumani senzo saneleyo, kuba ngokoqobo, akukho mntu uya kuba nakho ukujonga iliso ngamehlo ngaphandle kokuwela kwimbonakalo yakhe ebulalayo.
Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba lowo uzayo kuqala ukwangowokuqala ukukhonzwa. Nabani na ocinga ukuba ulungile ngokwaneleyo kumfazi ozelwe neNyanga eScorpio kuya kufuneka aphumelele kuvavanyo lwesihogo, kwimiceli mngeni enzonzobileni, kwaye aphume esoyisa, ngentliziyo yakhe isezinyweni.
Oku kwenzeka kuba uthanda ukuthatha lonke ithuba lokuthathelwa ingqalelo, ukuhlalutya imeko ngaphambi kokwenza into.
Ukubala izinto ezilungileyo nezingalunganga, ujonga, ubala amathuba okwenza into embi, zonke ezi ziimpawu zenyanga kumfazi weScorpio.
Balumke kakhulu kwaye banomonde kubudlelwane ngaphambi kokuba bathathe isigqibo sokwabelana ngayo yonke into nomntu. Nokuba kungenxa yokuba bebenokuphoxeka kwixa elidlulileyo okanye ngenxa yokuba belumkile ngokwendalo, kuyafana ukuba uyakuphinda ajonge kwaye aphindaphinde kathathu ukujonga ukuthembeka kunye nokukhuthazeka kweqabane lakhe ngaphambi kokuya phambili.
Kubo, umbono olula wokwabelana ngobomi babo nomntu, wokuvumela umntu ukuba abekho kwindawo engabonwanga mntu, ubenza ukuba bahambe.
Yimvakalelo engcwele, kwaye xa bekwenzile oko, unokuqiniseka ukuba yenziwe ngesizathu esivakalayo. Nangona ungenakho ukufikelela kuyo yonke indawo yakhe, kungcono kunanto.
Ngokunjalo nje, bafihla izinto ezininzi malunga nabo ngokusemandleni, okanye mandithi abavumeli abantu abaninzi ukuba bazingene. Ngapha koko, baya kufuna ukusasaza zonke iinkcukacha malunga nethagethi yabo, kuba baya kuziva ngakumbi kulawulo olunje.
Ngapha koko, ayisiyonto bayenza ngokuzithandela, kodwa endaweni yokuba iNyanga eScorpio iyenze ithuku ukuba izijonge ngakumbi.
Bomelela ngakumbi ngolu hlobo, ubuncinci ngokweemvakalelo. Ukuzithemba ngakumbi, umoya ongakumbi, isibindi, kwaye ngokubanzi bonwabile ngolu hlobo kuba bayazi ukuba banamathuba ambalwa okonzakala.
Umfazi wegemini kunye nendoda yescorpio
Nje ukuba umntu enze impazamo yokwenzakalisa iimvakalelo zabo, aba bafazi baya kuwutshisa umfanekiso womhlaseli ezingqondweni zabo, bangaze balibale. Impindezelo iya kuza ekugqibeleni kuba banokuba neenkani kule ndlela.
Inye into ekufuneka uyikhumbule xa ujongene neNyanga yabasetyhini beScorpio kukuba ungaze ubakhohlise. Ukuxoka kufana nokungcatshwa kwabo, ukwaphula izithembiso zomntu, isenzo esinyanyekayo sokuwohloka kokuziphatha ekufuneka kujongwane nako ngokukhawuleza.
Kufuneka bazi ukuba uhlala uthetha inyani, kwaye awuyi kubaphindisa nje xa isichotho siqala ukuwa.
Banokuba nemfesane kakhulu ukuba ubaxelela nje into engalunganga, kodwa hayi ukuba uyabaxoka. Lowo ngumzuzu wenkohlakalo nobungqongqo.
Ngandlela ithile ayihambelani neemvakalelo zakhe
Xa ujongene neNyanga kumfazi waseScorpio othandweni, kuya kufuneka ukhumbule ukuba akangomntu oyintombazana egudileyo onokuthi ujije nayo emva koko umlahle.
Ungene kokubi kakhulu kwaye okungcono, kwaye okoko nje umbonisa ukuba ulapho ngenxa yezizathu ezifanayo, uthando luya kutyatyamba njengophambene.
Njengeqabane lakhe, uya kufumana awona mahle mahle kunye naye, uve uthando olufudumeleyo kunye nothando olunomdla kwiinzulu zabantu abanomdla kwaye banomdla.
Nangona esenokungahambelani neemvakalelo zakhe, kwaye ukungazinzi kunokubakho kwelona xesha lingafanelekanga, kuya kufuneka ulamkele njengendalo yendalo. Emva kwayo yonke loo nto, ukuba ubuntu bakhe, kwaye akukho ukutshintsha.
INyanga kumfazi waseScorpio inokudideka kwaye iphikisane nabantu abaninzi. Bafuna ukuba abanye babathande ngenxa yento abayiyo, kodwa abakulungelanga ukuveza okuninzi malunga nabo kuba kukho iingozi ezininzi ezinokuthi ziqwalaselwe.
Bazakufuna ngenene ukungena nzulu kwimicimbi yeemvakalelo zobudlelwane, kodwa ngaphandle kokubeka ezabo iimvakalelo emngciphekweni.
Ngamanye amagama, bafuna ukuqondwa njengemfihlakalo, inzulu, ngaphandle kokuyibonisa kakhulu.
Ngaphandle kokuthetha kakhulu, ukungena kubudlelwane nalo mfazi kuya kuvavanya imida yakho, beka izakhono zakho kuvavanyo kolu hambo lwengqondo.
Ubumnandi obuya kuninceda nobabini baphuhle kwaye babe bhetele, indlela yenguqu, qiniseka nje ukuba ukhetha ngokuzithandela.
Njengoko bekulindelekile, enye yezinto ekufuneka abantu bejongile xa bejongana neNyanga kumfazi waseScorpio yimfihlo yakhe.
Akayi kufuna ukutyhila okuninzi ngaye, ngakumbi kwizigaba zokuqala zobudlelwane. Nangona kamva xa ufumana ukuhlonipha nokuthembela kwakhe, uya kugcina uloyiko oluthile lokungcatshwa olungayi kuhamba njengaye.
Banokubonakala ngathi banoburharha, baqonde ngokuthe ngqo, bade babenogonyamelo kwabanye abantu ngenxa yobuntu babo obunamandla nobukhutheleyo.
Bathanda ukujonga umhlaba njengonokunika ulonwabo ngokwawo, ke bayathanda ukuzonwabisa kukonwabela izivamvo, bathathe zonke izixhobo zokwenza njalo.
Amatye okuzalwa e-Zodiac: Isiteshi samandla eLitye lokuzalwa kwakho
Uphawu lweZodiac ngoAprili 5
Nge-Okthobha ye-12 Zodiac yiLibra-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
NgoNovemba 3 Imihla yokuzalwa
loluphi uphawu ngo-Agasti 31
ungaxelela njani ukuba indoda iyakuthanda
xa umntu egula ngumsindo kuwe
loluphi uphawu ngoFebruwari 26
Uthini umqondiso kaSeptemba 22